Solar sistemụ ụlọ oriri na ọ MEụ MEụ MEGA 20kW - 72 PV Panels - Kimroy Bailey Group
Solar sistemụ ụlọ oriri na ọ Restauranụ Restauranụ Mega Starter Solar nwere ike ị nweta ngwa ọrụ 5 dị mkpa na ụlọ ọrụ na nkezi ụlọ oriri ma chekwaa gị ~ 50% na ụgwọ ikike gị ngwa ngwa. GAlọ oriri na ọlarụ MEụ MEGA Starter Solar nwere ike ịnye ikuku ikuku ikuku (@ 5,000 kWh / afọ), Fryer Commercial (@ 8,000kWh / afọ), Walk-in Freezer (@ 8,000kWh / afọ), Heater Water (@ 6,000kWh / afọ)
SKU: RE-CK-Res01 Categories: Ngwa zuru ezu, Renewable Energy, Ngwaahịa Ike Mmeghari ohuru Tag: Gbanyụọ Sistemụ Grid
Solar sistemụ MElọ oriri na ọ MEụ MEụ MEGA 20kW - 72 PV dị mma maka nkezi ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ. Otu ngwakọta ngwakọta nwere ike ịgbanye ngwa ọrụ ise dị mkpa. Nweta nkwanye ụgwọ ozugbo na ụgwọ ọkụ eletrik gị dị elu. Ahụmịhe ndị ahịa na-enweta ihe karịrị 5% ma ọ bụ karịa mbelata ụgwọ ọkụ eletrik mgbe ịwụnye ngwugwu nri Mega Starter Solar.
Solar sistemụ MElọ oriri na ọ MEụ MEụ MEGA 20kW - 72 PV panels gụnyere:
72 Mbara Igwe na-acha uhie uhie na-enye ihe karịrị 20 kW nke ike n'okpuru ọnọdụ kachasị elu
4 Magnum Inverters nke na-ebute ihe karịrị 8,800W nke ike Peak
4 Classical 150s Charge Controllers
60 HEYClip Sunrunner USB Clip & 30 Nhọrọ D Rack 65 ″ x 39 ″ Modul with Grounding
Obere USB: 10 Water proof Strain Relief nwere oghere 2 & 2 nwere oghere 1, 2 UL USB 4/0 x 120 ″ Red & 2 UL USB 4/0 x 120 ″ ọcha, 10 MC4 10AWG - 50 ension Mgbatị USB
Solar sistemụ MElọ oriri na ọ MEụ MEụ MEGA 20kW - 72 PV adabara ụlọ oriri na ọ typicalụ industrialụ ụlọ ọrụ ahụkarị. Ọ bụ usoro zuru oke nke na-enye mbelata ngwa ngwa na ụgwọ ọnwa kwa ọnwa.
Na-eche ụdị ụdị akụrụngwa, wires size, amperage breaker wdg ịchọrọ maka sistemụ igwe gị ma ọ bụ na-eche ihe ị na-enweghị.
Solar sistemụ Solọ oriri na ọ MEụ MEụ MEGA 20kW - Ihe ndozi abụọ nke PV Panels nwere ike:
Fryer fryer (@ 8,000kWh / afọ)
Freezer-Walk if in (@ 8,000kWh / afọ)
Igwe ọkụ mmiri (@ 6,000kWh / afọ)
Igwe Agwa Central (@ 5,000 kWh / afọ)
Agụmakwụkwọ Maka Maka larlọ Mmanya Maka Maka Restauranlọ oriri na ọtụ MEụ 20kW - 72 PV
Usoro akwadoro maka usoro anwụrụ ọkụ MEGA Starter Solar Solar 20kW - 72 PV panels
1 nyochaa maka Solar sistemụ MElọ oriri na ọ MEụ MEụ MEGA 20kW - 72 PV
Galọ oriri na ọgaụ Meụ Mega Solar dị mma maka ụlọ oriri na-edozi oke ọnụ. Otu ngwakọta ngwakọta nwere ike ịgbanye ngwa ọrụ ise dị mkpa. Nweta nkwanye ụgwọ ozugbo na ụgwọ ọkụ eletrik gị dị elu.